I-model, betley cusub ee Bentley - Geofumadas
Oktoobar, 2009 Microstation-Bentley, egeomates My
In mudo ah aan ku jiray shaki, haddii Bentley ka hadlayay qaab cusub oo beddela dgnV8 ah, ka dibna waxaan u maleeyay in ay ahayd nooc ka mid ah qaab Tifaftirayaasha sida KML KMZ la Google Earth. Bilooyin badan ka hor ayaan soo dhigay boosto, oo doonaya in ay sidaa yeelato waxaa loola jeedaa i of V8i, ka dib markii lagu soo bandhigay Semifoonka iyo inkasta oo aan hubo in tani ay tahay mid aad uwanaagsan, waxaan qabaa inaan fahamsanahay waxa loola jeedo (ria) i.
Tani waa qaabka I-modelka, oo ah betley in Bentley uu rabo, taas oo suurtagal ah in ay isbeddelaan sida ay u arkaan badeecadooda iyo qaabka dgn / dwg / dxf V8. Inkasta oo ay na tuseen waxay aheyd kaliya jilbada, horeyba waa qeybaha V8i waxaan bilaabay si aad u ogaato waxa ay yihiin asxaabyadan iyo waxa aan u dhigan yahay macnaha Bentley.
Wixii Bentley, waa mid aad u fudud, fusion of awoodaha ee Project Wise iyo Microstation, alaabta ugu muhiimsan in ilaa hadda ay adeegeen: hal qof oo maareynaya dukumiintiga, kan kalena wuxuu ku shaqeynayaa xogta jimicsiga.
I-model, Bentley waxa uu rajeynayaa in uu qaato ProjectWise Navigator si loo isticmaalo adeegyo dhaqan ahaan, iyada oo ilaa hadda loo tixgeliyey qalab dhexdhexaad ah oo lagu fulinayo mashaariic fudud. Waxay tusinaysaa in hawsha shaqo loo rogi doono waxa uu yahay "Project Wise" horay u qabatay, laakiin iyada oo loo marayo maareynta xogta habaysan, raacaysa heerarka iyo isdhexgalka qalabyo kala duwan ee ka soo jeeda Gobollada Bentley ayaa soo iibsaday ka dibna dib loo dhisay XM.
Inta lagu jiro heerka Microstation, qaabka dgn wuxuu hadda isku-rogi doonaa xogta xml ee kala duwanaanta takhasuska, oo loo qaabeeyey qaab la mid ah wixii ay ku sameeyeen xfm. Bentley View waxaa lagu bedeli doonaa Navigator ProjectWise, ma naqaano haddii ay weli noqon doonto bilaash iyo Microstation waxay heli laheyd guryaha ProjectWise lite.
Anigu waxaan u-eegaa dhinaca isticmaalaha Bentley
Kobcin user ah waa ballaaran, sababtoo ah waxay hagaajin doontaa awoodda si ay u wada shaqeeyaan isla xogta, illowday fikradda faylasha. Si loo siiyo tusaale, in file nooca I-model ah, cadastre farsamo madhin kari lahaa xogta ay usii millimetric, halka dadka isticmaala GIS abuuri lahaa layers topological for falanqaynta da'ayeen, injineerada wadada lahaa dhaceen sub fasalka shaqo cusub iyo kuwa adeega dadweynaha ballaarinta shabakada. Dhamaan sharciyada topological waafajiyo tacaluqa by qaaska ah, u muuqan hawlgala file hal in culeyskiisu 20% ka mid ah waxa uu noqon doono files shaqsi, xuquuqda user iyo dayactirka lagu kaydiyaa taariikhda ka mid ah isbedel. Sayidka, xeerka topological ka dhigi lahaa line isla waa dhul cidhifka estate, qorshaynta magaalo derbiga u ilaashan, waayo, shuqulladiisa oo dadweynaha iyo qaab-dhismeedka yareynta for design derbiga daah; howlaha xuquuqda ah ee jeegga fudud iyo maamulka isbedelka waa la aqbalaa-calanka la diido.
Publisher Geoweb dabadeedna file ee soo bandhiga on Intranet ama Internet, la VPR kor fahamsan shuruudaha fudud reading (WMS, musqulaha), waxaad fartaan Wannaagga redline gacanta ku sixiddiisa (WFS-T). Samaynta waxa uu sameeyey, iminka ixtiraamaya jaangooyooyinka iyo xiriir la leh macaamilada xuquuqda, saxiixa digital iyo xakamaynta taariikhda.
Qiiqa ayaa u muuqda mid cakiran, laakiin waa fikradda BIM ee dalbashada hawlgal shaqo oo maalin kasta ku dhacaya dhacdo dhab ah. Record, laakiin waxaas oo dhan waxaa la samayn karaa iyadoo MicroStation iyo ProjectWise, laakiin xogta waa dibadda ama XML waxaa jira heer urur yar, waxaa jira xiriir la mid ah waxa ay ahaayeen mslinks ah Juquraafi; Sidaa daraadeed, waxaan isu bedelayaa isbeddelkan si aad u badan oo fulin ah fikradda xfm waxaa lagu soo bandhigay 2005, oo ku dhex jira Bentley Map XM. Haddii format V8 waa si fiican conceptualized iyo taageerada XML laga bilaabo taariikhda in, ka dibna waxaan lahaa qaab cusub oo V8i fudud versions cusub ee alaabta Bentley awood u leeyihiin inay akhriyaan habaysan siday u kala heerka xogta qaaska ah. V8i nuquladii hore akhriyi lahaa DGN oo aan u arkay oo XML u yeelaa sida caadiga ah, bal eeg, mid shaqeeya file Microstation Bentley Map.
Anigu waxaan u eegayaa isticmaalaha noocyada kale
Halkan waxa u muuqata in ay tahay caqabadda ugu adag, tijaabada isdhexgalka ee AutDesk Revit, taas oo u ogolaaneysa in xogta ay ka shaqeyso Bentley Architecture waxay u muuqataa inay tahay tilmaamaha, iyo inkasta oo ay tahay malahayga, Bentley waxaa laga yaabaa inuu doonayo inuu ka baxo. Xusuuso in wax la mid ah Bentley Map si ay ula macaamilaan mxd iyo lG ArcGIS, iyadoo farqiga u baahan shatiga ESRI la rakibay; xaqiiqda ah in tani ay hadda la shaqeyso Revit iyadoon u baahnayn shatiga waxay naga dhigeysaa in aan u maleyno inay tahay natiijada heshiis dhexmaray AutoDesk iyo Bentley, maaddaama AutoDesk ay ahayd tii ugu horeysay ee lagu hormariyo fikradda BIM ee Revit.
Iyadoo V8i noqon lahayd dadka isticmaala MicroStation format u shaqeeya dadka isticmaala ka baxsan noqon lahaa sarrifka hodan ah in ka akhriyi kartaa xogta hoos format aqbalay caadiga ah, ma waxa ay ka dhigeysaa PDF ama file dhoofiyo. egeomates Ugu dambayntii, BIM ka baxsan Architecture waxa lagu soo koobay fasiri tirooyinka meel dalwaddii sida walax nolosha dhabta ah in mar walba wakiil sida Txus ayaa sheegay. Waxa kale oo ay u badan tahay in Bentley ayaa doonaya in la siiyo ay fiican qaabab isticmaalka DXF / billabo ka shaqeeya iyada oo aan isbeddel dhowr sano, iyo hadda via plugins loo akhriyo lahaa by AutoCAD oo dhan sifooyinka ay V8i.
Haddii ay sidaas tahay, user a of a billabo Civil3D akhri-i-model inta aanba la dhisay mid ka mid dusha halka user AutoCAD ah arki lahaa dulinka ka adeegi jiray sida il hoose, sida dhibcood mesh oo kaliya. Waa maxay sugnaaday isticmaala guud ka laamaha kala duwan ee alaabooyinka abuurka loo yaqaan aadanaha (oo ay ku jirto il furan sidoo kale waa ganacsi) oo u furan tahay in shirkadaha waaweyn ka fiirsan interoperability xilli sida lacagta caalami ah oo aan laabtaada a labada dhinac in la xiro oo lagu daro goobada.
Gabagabada, I-model waa hirgelinta BIM, oo ay maamusho ProjectWise, oo ay maamusho Microstation iyo si wadajir ah ula socota magac kale.
AutoDesk Bentley Systems Dgn Dwg ESRI Google Earth KML egeomates My
Post Previous«Previous koorsooyinka GvSIG ee Valencia
Post Next Eeg AutoCAD 2010 sida AutoCAD 2007Next »